Myoma amin'ny tranonjaza - ny habeny ho an'ny fandidiana milimetatra, amin'ny herinandro. Ahoana no fialan'ny myomena uterine?
Ny Myoma dia neoplasma malemy ao amin'ny tranonjaza. Ny aretina dia tsy manome soritr'aretina mandritra ny fotoana lava, noho izany dia hita any amin'ny ambaratonga tara-bidy izy, rehefa manana volavolana be dia be ny myoma. Ho an'ny fitsaboana, zava-dehibe ny lanjany eo amin'ny sehatra misy ny tranon-jaza miaina, ny habeny - ho an'ny fampiharana, dia ireo mari-pamantarana manan-danja.
Diagnose ny fibromena uterine
Ny Myoma dia ny neoplasma niorina avy amin'ny sela miavonavona. Ny halavany dia afaka milanja 30 milimetatra na mihoatra. Na dia izany aza dia misy mio kely iray azo tsaboina amin'ny fampiasana ultrasound. Ny diagnostic ultrasound ny fibromena uterine no fototry ny fitsaboana rehetra. Ny fampiasana an'io teknolojia io dia azo atao ny mametraka tsy ny habetsaky ny fananganana, ny isany ihany, fa koa ny fametrahana ny toerana misy ny rafitra misy.
Ny tena zava-dehibe amin'ny fanandramana ny fibromida dia ny fanaraha-maso iraisana. Miaraka amin'ny fanampiany, dia misy ny myoma uterine lehibe iray, ny habetsaky ny fandidiana dia voafaritra amin'ny ultrasound. Ny dokotera, izay mahatsapa ny fiofanana amin'ny rindrina ao amin'ny renirano, dia afaka mandinika ny endrika, ny habeny ary ny toerana misy ny fivontosana. Ho an'ny antontam-baovao marina momba ny habetsahan'ny fanabeazana, ny rafitra, ny isan'ny fokontany, ny fianarana fanampiny dia natao:
Ny rétin-tsiram-baventy: rétine ray amin'ny taolam-paty;
Myoma amin'ny tranonjaza - dimensions
Ny habetsaky ny fibromena uterine dia tena manan-danja tokoa. Ity mari-pamantarana ity dia mivantana mivantana rehefa mifidy fomba fitsaboana. Miaraka amin'ny haben'ny tsiranoka kely dia azo atao ny fitsaboana. Anisan'izany ny fampiasana zava-mahadomelina hormonina izay mampiadana ny fitomboan'ny fivontosana. Ny fitomboan'ny fifindran'ny hormones momba ny firaisana dia miteraka fitomboan'ny fatran'ny otrikaretina. Vokatr'izany dia mihamitombo ny habetsahan'ny rajako. Amin'io, ny volavolana dia manondro herinandro maron'ny bevohoka (mitovy amin'ny habetsahan'ny tovovavy ny habeny).
Miankina amin'ny habetsahan'ny neoplasma, ny fototry ny voay dia azo zaraina amin'ny:
Ny haben'ny fibromes amin'ny milimetatra
Azo afindra amin'ny alàlan'ny ultrasound ny fatran'ny fibromena uterine ao amin'ny mm. Ny dokotera dia mandinika amim-pitandremana ny lava-kevitry ny dobo kely, indrindra ny tranonjaza. Mandritra ny fandaminana dia mandalina ny habetsaky ny fanabeazana isika, fa manombana ihany koa ny rafitra misy azy, ny isan'ny voay misy. Ilaina ny mamaritra ny toetoetran'ny tsaho. Ny mari-pahaizana lehibe iray dia ny haben'ny myoma.
Farany, ny dokotera dia manondro ireto fampahalalana manaraka ireto:
tsiranoka madinika - ny diagnosy dia atao raha toa ka tsy mihoatra ny 20 mm ny fandrefesana ny tumor;
ny salan'isa - io famaranana io dia natao raha 20-60 mm ny haben'ny tsipoapo;
Lehibe - maherin'ny 60 mm ny habeny.
Ny habetsaky ny fibromena uterine amin'ny herinandro
Ho an'ny toetra mampiavaka ny fivontosana, matetika ny mpitsabo no manombatombana ny habetsahan'ny fibromida amin'ny herinandro rehefa manombana ny fivontosana. Ohatra, raha voan'ny diabeta 11 taona ny vehivavy iray, dia midika izany fa ny habetsahan'ny tovovavy dia nitombo tamin'ny halehiben'ny taovam-pananahana nandritra ny 11 herinandro vohoka. Noho izany, miaraka amina diam-penin'ny diam-penina miendrika 3-4 cm, ny fehin-kevitra dia voalaza ao amin'ny famaranana: ny neoplasma (myoma) dia 6-7 herinandro.
Ny dokotera dia manoritsoritra ny habetsahan'ny tsiranoka amin'ny uterine ao anatin'ny herinandro toy izao:
myoma kely - ny haben'ny taova dia tsy mihoatra ny 4 herinandro;
ny salam-paritra - dia voamarina rehefa mifanaraka amin'ny 10-11 herinandro ny uterus;
lehibe - dia mitovy amin'ny herinandro 12-16 amin'ny fitondrana.
Amin'ny firy ny habetsaky ny fibromena uterine manao ny fandidiana?
Rehefa hita ny myoma uterine, ny toetran'ny fitsaboana dia singa iray izay hitondran'ny dokotera, ankoatra ny rafitry ny fanabeazana. Zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fivontosana amin'ny dinamika. Ny vehivavy manana aretina toy izany dia matetika mandalo fanadinana, ultrasound. Raha misy fivontosana haingana dia ilaina ny fidirana amin'ny serivisy. Raha toa ka tsy vita ny fandidiana, dia manala ny toerana malalaka rehetra ao anaty totohondry ny tsinay. Misy ny fanitsakitsahana ny asa an-tsitrapo.
Amin'ny famaritana ny hysteromyoma, ny habetsaky ny fandidiana amin'ny dokotera milimetatra dia tsy mametraka na mametraka azy. Ny fampisehoana amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny dia ny fitomboan'ny fibrôzia - ny fitomboany dia mitombo amin'ny 20 mm sy mahery kokoa mandritra ny taona. Ankoatra izany, ireo fibrôzôma izay tsy manana habeny lehibe dia miasa, saingy misy tongotra mahitsy. Eto amin'ity toerana ity dia misy ny mety ho fanodikodinam-piovana, ka miteraka fanovana ny sela, ny necrosis. Ny mari-pamantarana hafa momba ny fanesorana ny fibroid dia mety hahitana:
Fanaintainana mafy (fanaintainana maharitra eo amin'ny kibo, ao amin'ny ratra, bala).
Ny mioma amin'ny tranonjaza - ny halehiben'ny asa
Ny myoma mamindra dia manondro ny famolavolana tsara. Misy fiantraikany eo amin'ny ampahany ivelany amin'ny taova ilay izy, mitombo eo amin'ny làlan-kavanan'ny kelikely. Amin'ny endriny, mitovy amin'ny kofehy misy tongony mivongana na matevina izany. Ny hysteromieoma ambany kokoa dia mety amin'ny fanesorana. Mandritra izany fotoana izany, mitombo ny fanontaniana momba ny fitarihana fitsaboana rehefa mahatratra 80 mm ny fananganana ny diamondra.
Ny uterine uterine submucous - ny halavan'ny asa
Ny habetsaky ny hysteromyoma amin'ny fikarakarana an'ity karazana fitambarana ity dia tsy mitovy amin'ny voalaza etsy ambony (8 sm sy mahery). Ny mahazendana ny myoma mitoka-monina dia ny fametrahana ny toerana misy ny voay. Amin'io tranga io dia misy fibrôbinina ao amin'ny tranombakoka ao amin'ny uterus ny fanabeazana. Ny fitomboan'ny voina dia taratra ao anatin'ny taova. Ny fitsaboana amin'ny fikarakarana ny karazana neoplasma dia azo atao amin'ny fampiasana ireto fomba manaraka ireto:
myoectomy - fanesorana kodiarana;
Ny fanorenana ny arterônin'ny tranonjaza dia fanitsakitsahana ny fiterahana ny fivontosana, vokatr'izany dia mitombo ny fandrosoana.
Myoma isam-bolana betsaka
Rehefa jerena ny haben'ny tsiranoka amin'ny tranokala, dia tokony hojerena fa ny dokotera maro dia tsy manisy fiheverana ny habetsahan'ny fototeny tsirairay. Rehefa mifidy ny fomba fiasan'ny fandidiana, dia raisina an-tsoratra ny toerana misy ny myomas sy ny taonan'ny marary. Raha mbola mikasa ny hanan-janaka ny vehivavy, dia soraty amin'ny toeram-ponenana ny myoectomy amin'ny fiarovana ny taova. Ny fandidiana dia ataon'ny laparoscopy. Ny famerenana amin'ny laoniny ny vatana aorian'ny fandidiana amin'ny fomba fitsaboana dia haingana kokoa, noho izany, herintaona taty aoriana, raha tsy misy ny fahasarotana dia avela hanomana ny fitondrana vohoka.
Ahoana no fialan'ny myomena uterine?
Ny fibrain'ny uterine fibromes amin'ny fomba fampianarana tsotra dia ny myoectomy. Izany dia tanterahina amin'ny fanenjehana ankapobeny na amin'ny fampiasana ny fanenjanana an-tsokosoko. Alohan'ny ivoahana ny tranonjaza omanina, ny sombin-tsakafo ho an'ny fandidiana voatondro dia efa voamarina alohan'ny fandidiana. Azo atao amin'ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto izany:
Ny fiasan -tsofina nohavaozina - ny fikorotanana maromaro dia vita 2-3 cm eo ambonin'ny famokarana pubic. Avy eo dia avelao hirotsaka tsikelikely ny fidirana amin'ny jumbo ary hiantehitra izany. Ampiasaina ho an'ny haben'ny famolavolana lehibe.
Ny laparoskopy - eo amin'ny lafy kibo, misy lavaka maromaro vita amin'ny alalan'ireo fitaovana manokana sy fitaovana lahatsary fampidirana.
Myomectomy Hysteroscopique - ampiasaina ho an'ny môle masira. Ny fidirana dia amin'ny alalan'ny vagina, amin'ny fampiasana ny resectoscope. Amin'ny fampiasana an'io fitaovana io, izay mihatra amin'ny tumora misy ny fihodinan'ny hafanana, dia rava ny myoma, ary ny sasantsasany avy eo dia hosasana amin'ny lava-tranon'ny matroka.
Ny fitsaboana ny fibrokarin'ny uterine amin'ny habeny lehibe tsy misy fandidiana
Rehefa hita ny myoma uterine kely iray, dia manandrana mitsabo azy ny dokotera. Tsy azo ekena ny fitsaboana ny fibromidome lehibe tsy ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana. Mbola hitombo ihany ny fivontosana, ka mety ho simba haingana ny asan'ny taova sy ny rafitra hafa. Ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina dia azo atao rehefa hita fa mifototra amin'ny miaina miafina, ny habeny mety amin'ny 3 cm. Ny ankamaroan'ny toe-java-mahadomelina dia manana fiantraikany maharitra, ary tsy hita ny fanjavonan'ny tsinay.
Afobe avy amin'ny mastopathy
Pyrogenal amin'ny gynécologie
Ra mandriaka amin'ny vehivavy
Fitsaboana mastopathy amin'ny ravina karaoty
Hafiriana alohan'ny hiterahan'ny pilina ny fitondrana vohoka?
Tsy misy isam-bolana, fa tsy bevohoka
Fihetsehan'ny onja amin'ny onjam-peo eo amin'ny onjampeo
Famaritana ny fanimbana an-katerena
Fanosorana voangory - famoronana
Ahoana no hanamboarana khanum?
Condylomata amin'ny vehivavy
Amin'ny inona no manao akanjo fotsy fotsy?
Paraproctitis - soritr'aretina
22 antony tsy tokony hampalahelo ny fahavaratra
Fifadian-kanina iray andro dia tsara sy ratsy
Mpiandry Shepherd ao Mosko
Ahoana ny fomba famongorana ny herpes amin'ny molotra?
Vorona maty dia famantarana
Ny aretim-pisefo amam-panahy - ny antony rehetra mahatonga ny aretina sy ny tsara indrindra amin'ny fitsaboana
Fiterahana ny kambana